Isiselo saseColombia, ibranti | Ukuhamba kwe-Absolut
I-Absolut yaseColombia | | Kholambiya
Ilizwe ngalinye linotywala okanye isiselo salo sesizwe. Enye ye Kholambiya yiyo schnapps, ngokungathandabuzekiyo sesona siselo sinxilisayo esingumfuziselo nesithandwayo .. Sijoyine kolu hambo kwilizwe laseColombia ukufumana ubushushu kunye nencasa yemimoya yayo elungileyo.
Okokuqala, kufuneka kucaciswe ukuba ibranti (eyaziwa ngamagama ahlukeneyo kwiindawo ezahlukeneyo zehlabathi), sisiselo esidala njengoko sisasazekile. Kuyaziwa oko yayisele ikhutshiwe kumaxesha aphakathi. Igama "amanzi atshisayo" lalibhekisa kwimixholo yalo ephezulu yotywala, neyayenza into enokutsha. Elinye igama elinobubele elalisasetyenziswa kwaye liyaqhubeka nokusetyenziswa lelo "lamanzi obomi" (amanzi obomi), evusa umxholo wayo womoya.
La umdiza weswekile, owayevela eMzantsi-mpuma Asia, weza eMelika ezandleni zeSpanish. Ii-distillates ze-cane zivelise ii-liqueurs ezahlukeneyo ezinje ron kwingingqi yeCaribbean kunye cachaça eBrazil. Kwimeko yeengingqi zeAndes, isiphumo saba yibranti. Inkolelo ebanjwe ngokubanzi yokuba ibranti yaseColombia ivela kwisiselo sangaphambili seQuechua asiyontsomi nje.
I-distillery yokuqala e-Nueva Granada ivela kumhla ongekho ngaphantsi kwe-1784: i- "Real Fábrica de Destilaciones del Nuevo Reino", eVilla de Leyva. Emva kwenkululeko, ilizwe lase Colombian layenza imveliso yebranti, ethintela ukwenziwa kwegcisa.
1 Iimpawu zebranti yaseColombia
2 Iimpawu ezilungileyo
3 Ukusela njani ibranti
Iimpawu zebranti yaseColombia
Ibranti yesiqhelo yaseColombia ifunyanwa kwisiseko se I-94% okanye i-96% yotywala egxile kwi-sugar cane. Obu tywala bomile kakhulu, kodwa buthambile i-anise essence kunye nesiraphu yeswekile. Umlimi ngamnye unendlela yakhe kwaye ummandla ngamnye unencasa yawo.
Kunganzima ukuba umntu osele elele ukuba afumane amanqaku kunye nokwahluka. Ngokungafaniyo nezinye iziselo ezifana newhisky, ibranti (ekwabizwa ngokuba guaro) ayibonisi ngevumba okanye incasa. Oku akuthethi ukuba ukhathalelo olukhulu aluthathelwa ingqalelo ukuhlonipha ubungakanani kunye nemilinganiselo enika esi siselo eyona nto siyithandayo, ngokuchaseneyo. Kuyayithatha, ewe, uvakalelo oluqeqeshwe kakuhle lwevumba kunye nenkalakahla yokubamba kwaye uyonwabele.
Ibranti isetyenziswa ngeendlela ezininzi eColombia
Xa ungcamla ibranti elungileyo yaseColombia, kufuneka uqwalasele isidanga sakhe esiphakamileyo. Kungenzeka ukuba isiselo sokuqala "sitshise" umlomo, kodwa kwezi zilandelayo unokuba sele uqalile ukuxabisa imfudumalo kunye nemibala esichaze kuyo kumhlathi odlulileyo.
Kukwalungile ukuba uchaze ukuba ibranti yaseColombia ayiveli eColombia ngekhulu leepesenti. Kwiimeko ezininzi, i-anise eyenziweyo yenziwe ngayo neeoyile eziyimfuneko ezingeniswe eSpain; kwelinye icala, utywala bomswazi (obizwa tafia kwijoggon yabavelisi) ivela ikakhulu e-Ecuador.
Zininzi izinto ezaziwayo zebranti yaseColombia. Ibranti Antioquia Yenye yezona zidumileyo ngaphakathi nangaphandle kwemida yelizwe. Iveliswa e-Antioquia Liquor Factory (FLA) evela kwimolasses, kwiminyango nakwiswekile yommoba, inikezela ngezi ntlobo zintathu: ikepusi eblue, ikepusi ebomvu kunye nekepusi eluhlaza. Kuya kufuneka sigqamise uhlobo lweprimiyamu olubiziweyo Ibranti yaseRoyal 1493 ngamavumba aphucukileyo kwaye afakwe ngononophelo kwibhotile yeglasi entle apho kukrolwa ummoba kunye neentyatyambo ze-anise
Olona hlobo luhle lwebranti yaseColombia
Olona khuphiswano luphambili kuAntioqueño kwinqanaba lesizwe yibranti Incindi, Ikhutshwe kwiCundinamarca. Olu hlobo lwanikezela ngeendidi ezikhethekileyo zebranti Incindi yeNkulumbuso, kunye nencasa emnandi kunye egudileyo.
Kutshanje uphawu luye lwathandwa Iwaka leedemon, kwisixeko saseCagagena de Indias. Le rum iqhayisa ngokwenziwa ngokulandela iresiphi yakudala yotywala obufihlakeleyo ukusuka kwixesha lobukoloniyali. Ingaba yinto nje, kodwa kutheni ungazami?
Ezinye iintlobo zebranti zithandwa kakhulu eColombia IBlanco del Valle, iCaucano, iCristal, iNkokeli, uLlanero, iNariño, iMvelaphi, iPlatinam y Iikona ezintathu, phakathi kwezinye ezininzi. Obu tywala buveliswa kumasebe ali-16 kwangama-32 eli lizwe, kungoko ke kuninzi onokukhetha kuko.
Ukusela njani ibranti
Kulo mbuzo, phantse bonke abantu baseColombia baya kuphendula ngaphandle kwamathandabuzo ukuba, ngaphezulu kwako konke, umntu makasele i-brandy "kwinkampani elungileyo." Kufuneka kukhunjulwe ukuba sisiselo esinxilisayo esinokuthi sityiwe ngokumodareyitha. Ezi ziifomula eziqhelekileyo:
shot (wadubula), kwiiglasi ezincinci kakhulu. Kumnandi ngakumbi kubushushu obubandayo, nangona kwelinye icala, inxenye yesitrasi kunye neziqhamo zeziqhamo zilahlekile.
Kwiglasi emfutshane, ngokuzikhethela kuhamba kunye nomnxeba wamanzi okanye isoda kunye ne-wedge encinci.
Kwiiglasi ezinde, Zinomkhenkce omninzi kwaye zikhatshwa ziziqhamo zetropiki okanye iijusi zeecitrus.
Ukuhamba nebranti, iingcali zicebisa ukutya iziqhamo ezikweleenjiko kwiindawo ezincinci. Ikhokhonathi kunye neorenji nazo "zitshata" kakuhle nesi siselo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Isiselo saseColombia, ibranti
UMARIA ESTHER RICO sitsho
EColombia sineentlobo ezahlukeneyo kungekuphela kweentyatyambo kunye nezilwanyana kodwa nenkcubeko: ingingqi nganye ichongiwe yintsomi yayo, isifo sayo kunye namasiko ayo
KwiBoyacá umzekelo: siseTunja, umzi-mveliso wotywala waseBoyacá, apho kuveliswa khona ibranti yakwaLider, uphawu lwe-Onix emnyama kunye noRon Boyacá.
Kukho iindawo ezinomdla kubakhenkethi ezinje ngeVilla de Leyva, Tensa Valley, Paipa, Tunja. Nazi iindawo ezinomdla ezibuyela kwikoloni njenge-Santiago Apostol Metropolitan Basilicia Cathedral, iNdlu yoMseki uKaputeni Gonzálo Suárez Rendón, iNdlu ye-Escribano Juan de Vargas, indlu ye-Hinojosa enike lukhulu ukuthetha kwikoloni, i-Archive yeNgingqi yaseBoyacá enembali enkulu, iPozu de Hunzahúa okanye iDonato kakuhle, indawo yomtyholi, indawo apho iiChibacha zinqula khona ilanga kunye nenyanga yonke imihla kwaye babingelela kwizithixo zabo, isikhumbuzo Ingqolowa ngokokutsho kwembali kulapho ingqolowa yayihlwayelwa khona okokuqala eMelika ngamaxesha obukoloniyali.
Phendula UMARIA ESTHER RICO
UJavier Delgado Sinta sitsho
I-Antioqueño brandy uyisela njani
Phendula kuJavier Delgado Sinta